संकटमै सम्पन्‍न हुँदै विमानस्थल,कहिले होला त पुरापुरी सम्पन्न ?,हेर्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
संकटमै सम्पन्‍न हुँदै विमानस्थल,कहिले होला त पुरापुरी सम्पन्न ?,हेर्नुहोस।
भैरहवा / पोखरा ​: लकडाउन अ’वधिमा अधिकांश साना–ठूला आयोजनाका काम रो’किए। कामदार अ’भावसँगै कोरोना संक्रमण त्रासले आयोजना प्रभावित भए। तर, भैरहवामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने रोकिएन।
लकडाउनको सु’रुआतमा समस्या आए पनि त्यसलाई स’ल्टाउँदै आ’योजना अघि बढेपछि प्रगति देखिएको छ। यो विमानस्थलको काम अ’न्तिम चरणमा छ। यस आयोजनाको लकडाउन अ’वधिको भौतिक प्रगति साढे ४ प्रतिशत छ।
‘भौतिक संरचनाका मुख्य काम सकिएका छन्’, आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘आयोजना सम्पन्न हुन अबको काम उपकरण जडान र केही फि’निसिङ मात्र हो।’ उनका अनुसार विमानस्थलको काम करिब ९३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।
बाँकी ७ प्रतिशतमध्ये ५ प्रतिशत उपकरण ज’डानको काम हो भने २ प्रतिशत फि’निसिङ। उपकरण जडान गर्न चीनबाट ३५ जना द’क्ष ज’नशक्ति आउन लागेका छन्। आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार यहाँ आउन उनीहरूले चीनस्थित नेपाली दूतावासमा भिसा प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
३५ जनामा तीनवटा एसी जडान, धावनमार्गमा ला’इटिङसम्बन्धी र टर्मिनल भवनमा अन्य उपकरण जडान गर्नेहरू छन्। विद्युतीय उपकरण जडानसँगै विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ। यो अ’वधि भनेको जम्मा ९० दिन हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले केही दिनअघि विमानस्थल निरीक्षण गरेका थिए।
त्यस क्रममा मन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘कोभिड १९ को महामारीले असर नगरेको भए आ’योजना सम्पन्न भएर विमान उडानको प्रक्रिया पनि सञ्चालन भइसक्ने थियो।’ कोरोना म’हामारीका कारण हवाई उडान नहुँदा चीनबाट दक्ष ज’नशक्ति आउन नसकि आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुन पुगेको हो।
दक्ष ज’नशक्ति आउन नसके पनि विमानस्थलमा अन्य काम भने ती’व्र रूपमा भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार विमानस्थलको ३ हजार मिटर लामो धावनमार्ग तयार छ। प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, ट्याक्सी वे, विमान पार्किङस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, अग्निनिवारण भवन तयार छन्।
धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, विमान पार्किङ स्थलमा लाईटिङ, टर्मिनल भवन र कन्ट्रोल टावरमा विद्युतीय उपकरण जडान र अग्निनिवारण भवनमा केही ढोका लगाउन मात्र बाँकी छ। टायल्स, मार्बल्स र रंगरोगनमा सजिएर विमानस्थलको टर्मिनल, प्रशासनिक भवन, धावनमार्गलगायत आकर्षक देखिएका छन्।
विमानस्थलको भौतिक संरचनाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्वरुप देखिएको छ। यहाँ दुईवटा ठेक्कामार्फत काम भइरहेको छ, आ’ईसीबी वान र आ’ईसीबी टु। आ’ईसीबी वानअन्तर्गत भौतिक संरचनाका काम हुन्। आ’ईसीबी टुअन्तर्गत सञ्चार र मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी उपकरण जडानका काम पर्छन्। आ’ईसीबी वानका काम अन्तिम चरणमा छन्।
आ’ईसीबी टु’का लगभग ९८ प्रतिशत उपकरण आयोजनास्थलमा आइसकेका छन्। जडान गर्न मात्र बाँकी छ। वानअन्तर्गतका केही उपकरण सीमा ब’न्दका कारण आउन नसके पनि हाल उपकरण समुद्री र सडक मार्गबाट आउने क्रममा रहेको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए।
‘यहाँ भौतिक संरचना सबै तयार छन्। उपकरण जडान गर्नु मुख्य काम हो’, उनले भने, ‘जनशक्ति आएको ९० दिनभित्र सबै काम सकिन्छ।’वि’मानस्थलको निर्माण र सञ्चालनका लागि समानान्तर रूपमा काम भइरहेका छन्। विमानस्थल निर्माणसँगै सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ।
प्रहरीतर्फ विमानस्थल प्रमुखमा एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिएको छ। अग्नि’नियन्त्रणका लागि चारवटा वरुण यन्त्र (दमकल) ल्याइएको छ। ‘यता निर्माणका काम भइरहेका छन् भने उता (माथिल्लो निकायमा) विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्य’क काम पनि भइरहेका छन्’, आ’योजना प्रमुख अधिकारीले भने।
आ’योजनाको लागत ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ। अधिकारीका अनुसार काठमाडौंमा सुरक्षित रूपमा उडान–अवतरण भर्न नसक्ने वि’मान भैरहवामा सुरक्षित तवरले उडान–अवतरण गर्न सक्छन्।
काठमाडौंपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण भइरहेको यस विमानस्थललाई देशको मे’रुदण्डका रूपमा लिइएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै विश्वको कुना–कुनासम्म लुम्बिनीको सिधा सम्पर्क स्थापित हुने अ’पेक्षा स’रोकारवालाको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट
Previous धान खेतमा र’गिन बीउ उत्पादन गर्दै कृषि सहकारी,अब होला त कृषिमा क्रान्ति ?सरकारले देला त साथ?
Next मन्त्री बन्न ३० गुण हुनुपर्ने ! प्रधानमन्त्रीले ल्याउन सक्लान् यिनै गु’णयुक्त सा’रथि ?कि नसक्लान?,हेर्नुहोस।